Cute B Cup Big Ass Gabar Jabbaan Akira TPE Sex Doll
Jinsiyadaha jinsiga ee Japan,Caruus galmo fidsan oo jilicsan,B koob caruusadaha galmada,Caruusadaha galmada caato ah,Caruusadaha galmada Anime
Save 19% $ 3,177.38 $ 2,580.62
Akira waxay kasbatay quluubta dad badan muuqaalkeeda aan waxba galabsan. Ka dib oo dhan, tani ma aha mid aan waxba galabsan. Waxay leedahay waji yaab leh. Haddii aad naftaada ula dhaqanto sidii tuke, su'aashaada kaliya ayaa ah sababta aad u sugtay intaas oo waqti ah inaad la hoydo iyada. Waxay u egtahay mid qurux badan oo aan waxba galabsan, laakiin iyadu waa mid khibrad badan leh.
Akira waa gabar qurux badan leh muuqaallo muuqaal ah. Dabeecaddeedu waa mid deggan, naxariis badan oo deggan. Iyadu waxay leedahay qalbi diiran oo naxariis badan iyo jilicsan, dhinac carruureed ah. Waxay aad uga walwalsan tahay aragtida walaalaha iyo warbaahinta iyo kuwa kale, laakiin mararka qaarkood aad ayey u adagtahay in la sheego waxaad runti rabto. Dhinaca hoos u dhaca ayaa ah in go’aan qaadashada ay jirto xoogaa go’aan la’aan ah.
Waxay jeceshahay cunno badan, iyo madoobaadka qayb ka mid ah walaasheed kama waayi doono. Midka hore waa "yaanyo", gaar ahaan "yaanyada cayriin", khudradda darayga ah iyo wixii lamid ah. Laakiin runtii waxaan jecelahay inaan cuno baastada badda leh ee talyaaniga (saxankan wuxuu badanaa isticmaalaa yaanyo badan ama yaanyo suugo ah), laakiin waan necbahay yaanyada laakiin waan jeclahay inaan ku daro yaanyo.
Iyadu waa doll aad u macquul ah oo leh madax iyo jir aan laga saari karin. Ha dareento inay iyadu tahay qof nool.
Miisaan ： 63 lbs (29kg)
UstDayaanna ： 28.8 inji (73cm)
Dhexda ： 20.9 inji (53cm)
Miskaha ： 30 inji (76cm)
Siil ： 6.7 inji (17cm)
Futada ： 5.1 inji (13cm)
Afka: 3.9 inji (10cm)
Size xirxirida: 59.9*15.8*11.1 inches(152*40*28cm)